Sijoyine engqungqutheleni ye-Chatbot Africa & Conversational AI Summit - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on 1st March 2021 1st March 2021
Le ngqungquthela izokhombisa ukuthambekela kwakamuva kanye nezinguquko zakamuva zohlelo lokusebenza esikhaleni se-Conversational AI emakethe yase-Afrika. I-AI yokuxoxisana izoguqula izimpilo eziyizigidi e-Afrika futhi inhloso yale ngqungquthela ukusiza ekwakheni uhlelo lwezemvelo olungcono oluletha ochwepheshe abahamba phambili nezinhlangano ezakha, zakhe, futhi zithengise ubuchwepheshe bokuxoxa obususelwa ku-AI.
Ingqungquthela nombukiso wezinsuku ezi-2 izofaka izingxoxo eziqondakalayo nezingxoxo ezisekelwe ezixazululweni ezisiza ukuqonda umqondo wamaBots, i-Conversational AI, umsizi we-virtual, i-NLC, i-NLP, i-UX Design kanye nezinzuzo ezihambisana ne-Voice futhi kubhekwe izinselelo zokuqalisa kanye nezixazululo zazo.
Ngemininingwane engaphezulu bona ingxoxo.com
Ingxoxo yePhaneli ye-AfricArXiv
Siyajabula ukukumema engxoxweni yesigungu ebibanjwe yi-AfricArXiv futhi yenganyelwe nguLuke Okelo ovela eqenjini lethu:
I-AI kanye ne-Natural Language Processing (NLP)
phakathi kwezemfundo nemboni e-Afrika
Usuku: Mashi 4th 2021
isikhathi: I-12: 10 i-UTC (13:00 WAT, 14:10 IKAT / SAST, 15:10 EAT)
I-Artificial intelligence (AI) iba yingxenye yazo zonke izimpilo zethu zansuku zonke njengokuhumusha ngomshini nge-Google Translate ne-DeepL, i-Text to Speech algorithm, ukuqinisekiswa kwedatha, njll. Leli phaneli lifuna ukuhlanganisa abacwaningi nabasebenza base-Afrika kulo mkhakha abasebenzisa i-AI emkhakheni wokucubungula izilimi zemvelo i-NLP nokufunda ngomshini (ML) ukuba nengxoxo mayelana nokuqondiswa okujwayelekile kwe-Artificial Intelligence okwenzayo ezwenikazi, nokuthi yiziphi izinhlobo zezinselelo nezindawo zocwaningo ososayensi base-Afrika kanye nochwepheshe be-AI abangagxila kokulandelayo ukukhonza Imiphakathi yase-Afrika.
ULuka Okelo ingunjiniyela wesoftware yezinhlelo zemultimedia kanye nomcwaningi kubuchwepheshe obusafufusa besizukulwane esilandelayo, onguchwepheshe obuxubene nokungokoqobo okungathandwa kwabathelisi esikubona nobuhlakani bokufakelwa. Njengamanje ungumfundisi eTechnical University of Kenya futhi ungumthuthukisi wezobuchwepheshe ngeAfricArXiv.
Tunde Oladimeji ungumsunguli we-Affluence, isiqalo se-Afrika esakha i-Voice AI kanye nezixazululo zokuqashelwa kwenkulumo kwamabhizinisi okugxile ekuphimiseni nasezilimini ezisetshenziswa e-Afrika nasemiphakathini yakhona ehlakazekile. Njengesazi se-AI, unolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-10 esebenza ezinkampanini zobuchwepheshe zeFortune 500 ezibandakanya i-Electronic Arts, i-Intel neFacebook ezinhlakeni ezahlukahlukene.
Eunice Mutahi uyiDatha Management Associate enolwazi kwiDatha Management and Analysis ku-STATA, Excel, SPSS nasePython. Uphinde abe yilungu leNairobi Women in Machine Learning and Data Science, After work Data Science ne-A4Ayub. Ngalezi zingxenyekazi, usebenzisa iMathematics Learning neDatha Science kumaphrojekthi akhe we-NLP.
Mutembei Kariuki ungusomabhizinisi waseKenya Tech ophethe iziqu kuzo zombili izinhlelo ze-Economics kanye ne-Information futhi usebenza ukuletha izinzuzo zokuxazulula izinselelo e-AI e-Afrika ngokuqala kwakhe uFastagger. Ukholelwa ukuthi i-AI izolithuthukisa ngokuphelele ikhwalithi yempilo yesintu.
Ingqungquthela ye-Africa Chatbot & Conversational AI Summit izobandakanya zonke izinhlelo zokusebenza ze-Conversational AI, i-Chatbots, i-Voice, i-Virtual Assistants, ne-Conversation Design kuyo yonke imikhakha.
Sibheke phambili ekwamukeleni lapho:
Categories:	IndawoVula Ukufinyelela
Tags: Ukuhlakanipha okungekhona okwangempelai-chatbotUkucutshungulwa kolimi ngokwemvelo